26 Archives - Tameelay
မိမိနေထိုင်ရာ လောကကြီးတွင် သူငယ်ချင်းအဖြစ် မပေါင်းသင်း မပေါင်းအပ်သော လူများ၏ အကြောင်းများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အလိုက်သင့်ပေါင်းပြီး အတွင်းကြိတ်မကောင်းကြံသောသူ မိမိအားအလိုက်သင့် ရေလိုက်ငါးလိုက်ပေါင်းသင်းကာ မိမိအားနည်းချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တိုက်ခိုက်တတ်သော သူမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးမျက်ရည်ကို လမ်းခင်းကာ နင်းချပစ်လေ့ရှိသော သူများပင် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူများကို စွန့်ခွာသင့်ပါတယ်။ ၂။ လိုရင်တစ်မျိုး၊ မလိုရင်တစ်မျိုး ဆက်ဆံတတ်သူ မိမိထံမှ အခွင့်အရေးလိုချင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခွင့်အရေးမရနိုင်လျင်တစ်မျိုး၊ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ဆက်ဆံတတ်သော သူများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ မိမိအောင်မြင်ချိန်တွင် မိမိထံ၌ ရှိနေပြီး ကျရှုံးချိန်တွင် စွန့်ခွာတတ်သော “သာကူး” လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ၃။ မိမိကောင်းစားရေး အတွက် သူတစ်ဖက်သားကို ချောက်တွန်းတတ်သူ မိမိလျောက်လှမ်းရာ ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် သူတစ်ပါးကို နင်းချေပြီး လျောက်တတ်သော … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 26
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုယ်က အစွမ်းကုန်ချစ်ခဲ့ပေမယ့် အဆုံးသတ်မလှတဲ့အခါ ပုံမှန်ထက် အရမ်းခံစားရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဘယ်သူက အသည်းမကွဲဘဲနေမလဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမဆို ဒဏ်ရာဘယ်လောက်နက်နက် တနေ့နေ့မှာတော့ ဒီနာကျင်စရာတွေကြားက ရုန်းထွက်သွားနိုင်ကြတာပါဘဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုယ့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျမသွားအောင် အားပေးဖော်လိုပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကတော့ သင့်ကို စိတ်သစ် လူသစ် ဘဝသစ်တစ်ခုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်အောင် လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ၁။ ကိုယ်က သူပျော်အောင် အမြဲလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံထားပါ။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်လိုပါဘဲ ကိုယ်က သူ့ကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးပေမယ့် သူမပျော်ဘူးဆိုတာ သင့်အမှား သင့်လိုအပ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့စိတ်အပေါ်ပဲမူတည်တာပါ။ သင်ဘာတွေပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေး သူအမြဲတမ်း ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်လက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ၂။ သူတို့ခံစားချက်ကို သင်လုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ သင်သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဘယ်လောက် ရယ်စရာတွေပြောပြော ဘယ်လောက်နားလည်ပေးပေး … Read more
Categories General Knowledge Tags 26
အကြီးဆုံးရန်သူဆိုတာ အနီးဆုံးမှာ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ခင်ရင်ဘာအကျိုးမှ မမျှော်ကိုးပါနဲ့ မေတ္တာသန့်သန့်နဲ့ခင်ပါ . ကိုယ်မျှော်လင့်နေတဲ့အရာ မရခဲ့ရင် အမုန်းနဲ့လမ်းခွဲရမှာမြေကြီး လက်ခပ်မလွှဲဘူး ။ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင် တစုံတရာမျှော်လင့်ပြီးမချစ်ပါနဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ကိုယ်လိုချင်တာမရတဲ့အခါအလိုမကျမှုတွေက အပြစ်အဖြင့်ပြောင်းလဲပြီး အမုန်းနဲ့အဆုံးသတ်ရမှာပါပဲ ။ လူလူချင်း ဆက်ဆံရေးမှာ သာမာန်ထက်ပိုရင်းနှီးလာရင်သတိထားပါ လူတိုင်းက ကိုယ့်စိတ်လို မဟုတ်ဘူး ။ တချို့က စေတနာသန့်သန့် မေတ္တာသန့်သန့်နဲ့ ခင်မင်ဆက်ဆံပေမယ့် အများစုက ကိုယ့်အပေါ် မရိုးသားဘူးဆိုတာကို အမြဲသတိနဲ့ ယှဉ်ထားပြီး ဆက်ဆံပါ ။ ကိုယ်ကဖြူနေရင်တောင် အကြံသမားတွေဆိုတာအချိန်မရွေး ကိုယ့်စေတနာကို အရောင်ဆိုးပေးဖို့လက်မနှေးကြပါဘူး ။ ကိုယ်လည်းလူထဲက လူပဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကူညီတာကိုလာစော်ကားရင်း ဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲမိမှာဘဲလေ ။ မေတ္တာအစစ်နဲ့ ကူညီတာကို ရိုင်းစိုင်းစွာနဲ့ လာစော်ကားရင်လက်တုန့်ပြန်မိမှာပဲ ကိုယ့်ဖက်က ရိုးသားခဲ့တာလေ … Read more
ညီမလေး …သို့ . . . မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ညီမလေး
ညီမလေး …သို့ မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုး ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ညီမလေး။ မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ထဲက သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ လက်ကို သက်ဆုံးတိုင်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာဘဲ မို့လား။ မိန်းမကောင်းတွေ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အိမ်ထောင်မကွဲခြင်ကြဘူးလေဖြစ်လာတဲ့ ကံကြမ္မာအပေါ်မှာ မတတ်နိုင်တော့တဲ့ နောက်ဆုံး မှလွှတ်ချလိုက်ကြရတာပါ။ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ကို စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျတဲ့ မျက်လုံးတွေကတော့ အထင်သေးစိတ်နဲ့ကြည့်တတ်ကြသလို စိတ်ဓာတ်မြင့်တဲ့သူတွေက စာနာစိတ်နဲ့ ကြည့်တတ်ကြတယ်ဖေးမကြတယ် နွေးထွေးကြတယ်နော်။ ညီမလေးရေ…..ငါအိမ်ထောင်ကွဲ ဆိုပြီး အားငယ်စရာမလိုသလို အထင်သေးတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ အောက်လုံးထိုးတတ်တဲ့ စကားတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်နဲ့ညီမလေး ကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ ကိုယ့်လျှောက်နေတဲ့ လမ်းမှာ ကိုယ့်စံနုှန်း နဲ့ ကိုယ် ဆက်လျှောက်ပါ ကိုယ့်ကို အောက်လုံးထိုး တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သူတွေရှေ့အကြောတင်းတင်နဲ့ ဖြတ်သန်းပြလိုက်ပါ ညီမလေး။ အချို့တွေဆိုတာ သူတို့အရည်အချင်းက အိမ်ထောင်ကွဲ မိန်းမ … Read more
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 26
ကျွန်တော် သတိထားမိတဲ့ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ…!
ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် … … မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်က မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာ နေပြီကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် ။ အခုကြ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တရက်မှာပဲ သိတောင်မသိထားတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ် ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေလာတဲ့ မိဘတွေကိုစွန့့်ခွာလာတယ်။ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းပြုစုပြးီရင် ကျွန်တော့ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ သူပျော်နေပြန်တယ် ။ပြီတော့ ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော် မေးခွန်းအချို့မေးနေမိတယ် ! ဒါလည်းပဲ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မသနား … Read more